Somaliya oo 3-sano kadib raja ka qabta cafinta daynta – Idil News
Somaliya oo 3-sano kadib raja ka qabta cafinta daynta
“Somaliya oo 3-sano kadib raja ka qabta cafinta daynta”.
Sida bayaanka lagu xusay, Somaliya marka ay soo gaarto qiimaynta HIPC ee ku dhawaad saddex sano kadib, waxay fursad u heli doontaa in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay,islamarkaana waxaa bulshada caalamku dib u furi doontaa marin u helista ilo dhaqaale oo dheeraad ah oo lagu xoojinayo dhaqaalaha dalka, gacan ka gaysato hagaajinta xaaladaha bulshada iyo kor u qaadista shaqo abuurka Somalida.
“Waxaan soo dhoweyneynaa dadaalka Somaliya ay ugu jirto soo celinta xasilloonida, la shaqeynta kuwa amaahda leh, iyo qaadashada istiraatiijiyad yareynta saboolnimada,” ayuu yiri Madaxweynaha Baanka Adduunka David Malpass.
Dib ugu soo noqoshada maalgelinta joogtada ah ee Soomaaliya waa astaan muhiim ah, waxaana rajeyneynaa horumar dheeri ah oo dhanka dhaqaalaha iyo bulshada ah. ”
“Waxaan jeclaan lahaa inaan ugu hambalyeeyo dowladda Soomaaliya dadaallada badan ee ay ku tilaabsatay sannadihii la soo dhaafay ee keenay dhacdadan muhiimka ah,” ayay tiri Kristalina Georgieva, Agaasimaha Maareynta IMF….